April 8, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'April 8th, 2017'
Ra’iisul Wasaare ku Xigeenka Cusub oo Maanta Xilka la Wareegay (SAWIRRO)
April 08, 2017 – Ra’iisul Wasaare ku xigeenka cusub ee dowladda Faderaalka ee Soomaaliya Mudane, Abuukaate Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho xilkii kala wareegay Ra’iisul Wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Mudane, Maxamed Cumar Carteh Qaalib. Ra’iisul Wasaare ku xigeenkii hore ayaa u mahadceliyey dhammaan madaxdii dawladdii hore iyo Shaqaalaha Xafiiska …
Dowladda Kenya oo Sheegtay Inay Dishay Sarkaal Sare oo ka Tirsan Ururka Al Shabaab (Akhriso)
April 08, 2017 – Xukuumada dalka Kenya ayaa shaacisay inay howlgal ay iska kaashadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowladda Kenya ay ku dileen Taliye ka tirsan Xarakada ururka Al-Shabaab. War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Difaaca ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in degaanka Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose ay ku dileen …
Weerarkii Magaalada Stockholm (VIDEO)
Wararkii u dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Stockholm ayaa sheegaya in gabi ahaanba la adkeeyay amaanka xarumaha Dowladda goobaha ay maraan Tareemada iyo xarumaha mashquulka badan. Booliiska dalka Sweden iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa heegan buuxa la galiyay, waxaa gudaha dalka Sweden lagu faafiyay sawirada Shaqsigii ka dambeeyay weerarkan oo booliiska dalkaas …
Wariye Cabdimaalik Coldoon oo Maanta Lagu Xukumay Magaalada Hargeysa
April 08, 2017 – Caasimadda Somaliland ee Hargaysa ayaa waxaa maanta ka dhacay xukun lagu riday Wariye Cabdi Maalik Muuse Coldoon oo bilihii la soo dhaafay ku xirnaa xabsi ku yaala Magaalada Hargaysa. Qaadiga maxkamada ayaa ku dhawaaqay in xukunka Wariye Cabdi Maalik Muuse Coldoon uu yahay xarig laba sano ah, kadib markii cadeymo kala duwan …
Dowladda Federaalka iyo Maamulka Galmudug oo isla Gartay Dib u Dhigista Doorashada Madaxweynha
April 08, 2017 – Dowladda Federalka Soomaaliya iyo Maamulka Galmudug ayaa maanta isla gartay in dib loo dhigo doorashada Madaxweynaha Maamulkaasi oo lagu waday inay dhacdo 10-ka Bishan aan ku guda jirno oo ay inaga xigaan 2 cisho oo kaliya. Kadib kulan magaalada Cadaado xalay ku dhexmaray Wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Siciid Faarax (Juxa) iyo …